အကောင်းဆုံး Multi line Cold Cut T Shirt Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Multi line Cold Cut T Shirt Bag စက် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ပုံစံ - SS-VTP Series
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Servo-Double Layer Multi မောင်းနှင်ထားပါတယ်။-လိုင်းအေး-T ကိုဖြတ်-အင်္ကျီအိတ်ပြုလုပ်သည့်စက်
မြင့်မားသောစွမ်းရည်:640pcm.4 လိုင်းဖြင့်;960pcm.6 လိုင်းဖြင့်;1280pcm.8 လိုင်းဖြင့်.
ဒီစက်ကို ကွန်မန့်ဖြစ်အောင် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။-ပုံနှိပ် T-အင်္ကျီအိတ်များသို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံနှိပ် T-အင်္ကျီအိတ်.
တံဆိပ်ခတ်ဘားသည် T ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။-အင်္ကျီအိတ်များနှင့် ရိုးရိုးအိတ်များ.
မြန်ဆန်တိကျသော servo-မောင်းနှင်ထားသော အစာကျွေးစနစ်သည် တိကျသောအိတ်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတို့ကို သေချာစေသည်။,0 အတွင်းသွေဖည်.5mm.
HMI နှင့် PLC ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အပြည့်အဝစနစ်,စက်နှိုးစက်ရပ်သွားသည့်အခါ အချက်အလက်ကိုပြသပါ။.
ထူးခြားသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ပြောင်းလဲလွယ်သော T-အင်္ကျီအိတ်များနှင့် ပြက္ခဒိန်အိတ်များ.(ရွေးချယ်ခွင့်)
ပရင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် ပုံနှိပ်အိတ်များအတွက် တိကျမှုကို အာမခံပါသည်။.(ရွေးချယ်ခွင့်)
Lline&ကြိမ်;W x L x T x Layer အလံအိတ်
Line x T x W x L x Layer မက်တယ်။-ဖြတ်တောက်ခြင်း။
အလုပ်နေရာ ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား N.ဒဗလျူ./
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ T-အများဆုံး.၁၂၀x၄
F-အများဆုံး.၁၆၀x၄ 1Hp 4P
F-အများဆုံး.150x4 1Hp 4P
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ T-အများဆုံး.၁၂၀x၆
F-အများဆုံး.၁၆၀x၆ 1Hp 4P
F-အများဆုံး.150x6 1Hp 4P
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ T-အများဆုံး.၁၁၅x၆
F-အများဆုံး.၁၄၀x၆ 2Hp 4P
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ T-အများဆုံး.၁၂၀x၈
F-အများဆုံး.၁၆၀x၈ 1Hp 4P
F-အများဆုံး.150x8 1Hp 4P
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ T-အများဆုံး.၁၁၅x၈
F-အများဆုံး.၁၄၀x၈ 2Hp 4P
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/multi-line-cold-cut-t-shirt-bag-machine.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. သည် Taiwan တွင်အခြေစိုက်သည့် Multi line Cold Cut T Shirt Bag စက် ကိုပံ့ပိုးပေးသောအထူးတန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးထားပြီးထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားစွာရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
အကောင်းဆုံး Multi line Cold Cut T Shirt Bag စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။